Ala mando: toetra, firafitra, toerana, flora ary biby | Fanavaozana maintso
Portillo Alemanina | 27/04/2021 09:27 | Tontolo_iainana
Betsaka ny tontolo iainana eto an-tany izay misy ny ampahany betsaka amin'ny zava-manan'aina manontolo. Ny andiana ekosistema izay manana ny mampiavaka azy dia fantatra amin'ny hoe biome. Ny biome an'ny ala mando Fantatra amin'ny anarana maro isan-karazany izy io: ala orana, ala mikitroka, ala mikitroka, sns. Izy io dia miavaka amin'ny fananana karazana zavamaniry sy karazam-biby maro karazana ary koa mampiavaka azy amin'ny fananana hazo lehibe. Izy io dia iray amin'ireo tontolo iainana manan-danja indrindra amin'ny planeta.
Noho izany dia hanokana ity lahatsoratra ity izahay hilaza aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny ala tropikaly sy ny maha-zava-dehibe azy.
1 Toerana ala mando
2 Karazana ala tropikaly
2.1 Ala mando
2.2 Ala mando mando
3 Firafitry ny ala tropikaly
4 Flora sy biby
Toerana ala mando
Ny voalohany dia ny mahafantatra ny faritra misy ny planeta misy ireto karazana biome ireto. Ny toerana jeografika an'ny ala mando manarona manodidina ny 6% amin'ny velaran'ny tany ary eo amin'ny tropik'i Capricorn sy ny tropikan'ny homamiadana no misy azy. Ny faritra ao amin'ny kaontinanta Aziatika dia solontenan'ny ala tropikaly sy ny kaontinanta amerikana sy afrikanina sasany. Misy ala mikitroka any amin'ny nosy Oceania izay ala mikitroka hafakely.
Tsy maintsy raisina fa ny hakitroky ny ala dia zava-dehibe mba hahafahana mandray karazan-javaboary betsaka. Raha mijery izay ala manan-danja indrindra manankarena eto amin'ny planetantsika isika dia tsy mila mankany Amerika atsimo. Eto isika manana ny ala ala Amazon. Ilay ala tropikaly Amazon dia fantatra ihany koa amin'ny hoe Amazonia. Ny ala faharoa manandanja indrindra dia ny ala Kongo sy ny hafa tsy dia lalina loatra any amin'ny faritra Madagascar, Mexico, Guatemala, Arzantina na New Guinea.
Karazana ala tropikaly
Ho hitantsika ireo karazana ala isan-karazany arakaraka ny toetrany sy ny toerana misy azy ireo. Misy karazany samy hafa amin'ny fomba fijery fototra kokoa toy ny ala mafana sy tropikaly. Andao hojerentsika hoe inona ireo fanasokajiana ankapobeny ireo:
Any amin'ny tontolo mando sy mafana kokoa no misy azy, misy faritra manasongadina ny toetrandro ekoatera. Mety ho mihoatra ny 10 degre avaratra sy atsimo isika raha mandray ny ekoatera ho referansa. Mandeha mandritra ny taona ny maripanan'ny ala tropikaly na eo aza ny eritreritra. Ny salan'isa dia eo anelanelan'ny 21 sy 30 degre, noho izany dia maripana be izy ireo. Izy io dia miavaka amin'ny fisian'ny rotsakorana betsaka na amin'ny matetika na amin'ny hafanana.
Ny ala mando betsaka indrindra dia any Azia atsimo atsinanana, Amerika afovoany, Amerika atsimo, afrika afovoany sy andrefana, aostralia, inde andrefana, ary ireo nosy Nouvelle-Guinea. Ny ala tropikaly any Amazon dia manana harena manankarena amin'ny zavamaniry sy biby. Izy io dia raisina ho toy ny havokavoky ny planeta, na dia tsy dia feno loatra aza izy io noho ny hamaroan'ny hazo manatanteraka fotosintesis sy fanampiana rehefa milentika ny karbaona dioksida mba hanadio ny ampahany amin'ireo entona entona entin'ny olombelona mankany amin'ny atmosfera. Ireo entona ireo no mahatonga ny fiovan'ny toetrandro, ka izany no mahatonga ny ala tropikaly any Amazon singa iray lehibe hampiatoana ny fiakaran'ny maripana manerantany izy io.
Ala mando mando
Tsy dia fahita firy izy ireo noho ny tropikaly ary any amin'ny faritra somary mangatsiaka kokoa sy mafana kokoa ny maripana. Izy ireo dia geolocated indrindra amin'ny toetr'andro mando any anaty ranomasina fa azo jerena ihany koa any amin'ireo faritra misy toetr'andro mando na tropikaly.
Raha mametraka ny tenantsika amin'ny sarintany isika, dia afaka mahita faritra amoron-tsiraka sy tendrombohitra misy an'io ala mikitroka io. Amin'ny toetr'andro, hitantsika fa eo izy ireo 10 sy 21 degre Celsius, noho izany manana hafanana ambany kokoa noho ny ala tropikaly izy ireo. Ny orana dia ambany ihany koa satria tsy misy hamandoana be toa ny tontolo iainana hafa. Azontsika atao ny mahita azy ireo any amin'ny faritra atsimon'i Australia, Japon, United Kingdom, Norvezy, New Zealand, ny morontsiraka avaratra-andrefan'ny Amerika Avaratra. (Ohatra; ny ala Valdiviana na ny ala mikitroka apetraky ny Appalachians)
Firafitry ny ala tropikaly
Andao hojerentsika hoe inona ny firafitry ny ala tropikaly ary koa ny sisa. Ny harena ara-nofo sy ny zavamananaina dia mahatonga ny ala miforona amin'ny alàlan'ny rafitra izay misy sosona 4 eo amin'ny sisiny. Hahafantatra ny tsirairay amin'ireo sosona isika:
Pop-up sosona: Hazo ny ankamaroany ary maherin'ny 40 metatra ny haavony. Izy ireo dia hazo mahazaka ny hazavan'ny masoandro ary izy no sosona avo indrindra. Ireo hazo hita eto dia maitso mandavantaona ary manana ravina kely dia kely. Waxy ny tampony ary manampy amin'ny fisorohana ny fahamainana ateraky ny taratra masoandro mihoampampana.
Kanopy: Izy io no stratum faharoa amin'ny ala tropikaly ary manana ny haavony 30-45 metatra. Io no faritra iarahan'ny sampana sy ny satro-boninkazo mamorona ravina sy rantsana matevina. Azo lazaina fa karazana cobweb ho an'ny sosona ambany izy io. Ity sosona ity dia misy ny ankamaroan'ny karazan-javamaniry sy biby isan-karazany hita ao amin'ireo tontolo iainana ireo.
Undergrowth: Eo ambanin'ny canopy izy io ary faritra misy hamandoana avo sy ambany masoandro. Eto ny zavamaniry misy indrindra dia ireo zavamaniry misy ravina lehibe namolavola an'io habe io mba hisamborana ilay hazavana kely misy ary manana sampana fohy dia fohy.
Floor: farany manana ny sosona tany izay itomboan'ny zavamaniry miadana isika noho ny hazavana ambany mahatratra ny hakitroky ny zavamaniry maro be. Misongadina ny ravina zavamaniry eto an-tany ary be dia be ny zavamananaina lo. Ireo tany ireo dia manankarena sy mahavokatra tokoa.
Flora sy biby
Notsipihanay fa ny ala mando dia manana karazana heterogeneous maro karazana flora sy biby. Izy ireo dia miavaka amin'ny fananana katalaogin'ny karazan'ala sy zavamaniry ary karazan-javamaniry maro karazana izay mety manana halavany raha atambatra amin'ny karazan-javamaniry bitika kokoa noho ny ekosistia hafa.
Ny maha-zavamaniry zavamaniry marobe dia tsy mitovy amin'ny fomba fijerin'ny olombelona na amin'ny fanafody na amin'ny fanangonana resina sy latéka. Anisan'ireo zavamaniry lehibe hita any anaty ala any aminay lianas, orkide, bromeliad, kirihitra, etc.
Mikasika ny biby dia manana biby marobe koa isika noho ny sakafo betsaka. Misy karazana eksotika sy endemika isan-karazany izay anisan'ity biome manaitra ity. Mampiavaka azy ireo ny fananana bibikely isan-karazany toy ny vitsika, lalitra, bibikely hazo, lolo, sns. Manana biby lehibe kokoa toa antsika koa isika alligators, rajako, sokatra, karazana bibilava rehetra, jaguars, ramanavy, tigra, voay, sahona sy tarantula maro be... sns
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny ala tropikaly sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Ala mando